Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Waxaan taxay ugu 5 kaymaha ugu quruxda badan ee Europe oo keliya in waqti Holidays Season iidaya! caado The fasax ka sugayeen inta badan ku caashaqay safarka waa xeebta. Laakiin Europe leeyahay hab ka badan xeebta si ay u sahamiyaan. Nagu soo biir maadaama aan qaadan aanad cadho burburin ku hareeraysan qaar ka mid ah…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Ilaawaan diyaarad ee tareenka iyo safri Yurub Wonder Weekend a. Save A Tareen wax fudud inay jartaan daqiiqo gudahood oo aan ajuurada ku daray, si aad ku raaxaysan karaan kaydka on hawlaha! Waa kuwan xulashooyinkeenna meelaha ugu wanaagsan ee Yurub…
Waqtiga Akhriska: 2 daqiiqo jiilaalka oo ku saabsan si loo soo afjaro waa iyo xagaaga la garaacay on albaabbada iyo tani waa markii ugu marka aad la qorsheeyo fasaxyada aad soo socda. Dhammaanteen waxaan raadineynaa habka kharash-ku-ool ah ee socdaalka iyo haddii aad raadineyso habka ugu fiican…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waayo dal yar, Belgium ayaa ay qayb caddaalad ah safarada tareen fiican la badan hortiisa la yaab leh si ay u arkaan. xeebta Belgian waa hab fiican in aad isku dejiso oo wuxuu ku raaxaysan qorraxda iyo 65 km xeebaha, there are many exciting seaside activities to…